Kenya: Muxuu sameeyay darawalkii rakaabkiisa ka badbaadiyay 'weerarka al-Shabab?' - Jigjiga Online
HomeSomalidaKenya: Muxuu sameeyay darawalkii rakaabkiisa ka badbaadiyay ‘weerarka al-Shabab?’
“Gaari waday shaqaale ka tirsan kuwa dhismaha sameeya, oo kasoo baxay deegaanka Borehole 11 ayey xalay beegsadeen koox lagu tuhunsanyahay Al-Shabaab, laakiin darawalkoodii ayaa badbaadiyay”, ayuu yidhi Mr Kyatha.
Sarkaalkan ayaa ficilka uu darawalkaas sameeyay ku qeexay ‘geesinnimo’.
“Darawalku wuxuu kasoo jeeday deegaanka, laakiin inta badan shaqaalaha markaas la socday waxay ahaayeen kuwo aan kasoo jeedin deegaanka, waxaana aaminsan nahay in iyaga la bartilmaameedsanayay”, ayuu yiri sarkaalka, oo u warramay warbaahinta maxalliga ah ee Kenya.
Deegaanno ka tirsan Mandheera ayaa horay looga fuliyay weerarro lagu dilay dad aan deegaanka kasoo jeedin, waxaana mas’uuliyaddooda sheegatay Al-Shabaab.
36 ruux oo u badnaa dad aan Muslim ahayn ayaa lagu dilay goobtaas, ka dib markii ay dableyda rasaas oodda uga qaadeen, waxaana weerarkaas mas’uuliyaddiisa durba sheegatay Al Shabab.
Bishii July, Ugu yaraan 3 nin oo hubeysan ayaa isku dayay inay weerar ku qaadaan goob uu ka socday dhismaha isbitaal maxalli ah, iyagoo “damacsanaa inay halkaas ku laayaan dadka aan deegaanka kasoo jeedin”.
Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Xaaladda Itoobiya Iyo Nuxurka Hadal Uu Jeediyey Jawaar Mohamed